Southampton oo taako u dhigtay kooxda Manchester United oo ku soo booqatay garoonka St. Mary’s… +SAWIRRO – Gool FM
Southampton oo taako u dhigtay kooxda Manchester United oo ku soo booqatay garoonka St. Mary’s… +SAWIRRO
(England) 22 Agoosto 2021. Kooxaha Southampton iyo Manchester United ayaa dhibaha ku qeybsaday garoonka St. Mary’s, kaddib markii ay ku kala baxeen bar-bardhac 1-1 ah, kulan qeyb ka ahaa horyaalka Premier League ee dalka England.
Qeybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay 1-0 ay ku hoggaamineysay kooxda martida loo ahaa ee Southampton.
Daqiiqadii 30-aad kooxda Southampton ayaa hoggaanka u qabatay ciyaarta kaddib markii uu gool iska dhaliyay xiddiga reer Brazil ee Fred, ciyaarta ayaa waxay sidaas ku noqotay 1-0.
55 daqiiqo marka ay dheesha mareysay kooxda Manchester United ayaa dhalisay goolka bar-bardhaca kaddib markii uu 1-1 ka dhigay Mason Greenwood oo caawin ka helay saaxiibkiis Paul Pobga.
Ugu dambeyntii ciyaarta ayaa ku dhammaatay bar-bardhac 1-1 ah ay ku kala baxeen labada kooxood Southampton iyo Manchester United, kaddib ciyaar aad u xiiso badan ay ku wada ciyaareen garoonka St. Mary’s.
Shaxda rasmiga ah kulanka London Derby Kooxaha Arsenal iyo Chelsea ee horyaalka Premier League oo la shaaciyay
Chelsea gooldarro dusha u saartay Arsenal oo ay booqatay, Gunners oo ku jirta kaalimaha ugu hooseya horyaalka & Lukaku oo shabaqa soo taabtay... + SAWIRRO